"Tsy mahalala ny ho ampitso ianareo. Inona moa ny ainareo ? Fa zavona ihany ianareo, izay miseho vetivety, dia levona." Jakoba 4:14
"Jesosy ... mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany." Hebreo 7:22,25
Nody avy tany amina toeram-pandihizana, indray asabotsy alina : zatovo dimy tra-doza ka maty... Zava-doza mpiseho, ary fahita matetika! Falifaly izy ireo, niara-dia samy mpinamana, niala voly, tsy nahafantatra hoe io no ho alina farany ho azy ireo...
Handeha hiala sasatra: minitra vitsy alohan'ny hipetrahany, dia nianjera ny fiaramanidina.
Tampoka sady toa hetraketraka ireo fahafatesana ireo, ka mampandini-tena antsika, mihoatra noho ny fahafatesan'olona efa be taona na marary. Ireo mpizaha tany ireo ve, ireo zatovo ireo ve, vonona ny ho faty tamin'izay fotoana izay? Ary raha ianao no teo amin'ny toerany, mba ho vonona ve ianao?
Ho antsika, ireo dia vaovao ratsy mampahatsiahy fa marefo sy fohy ny fiainana.
Kanefa dia tonga tety; an-tany Jesosy, nitondra vaovao mahafaly, nanambara ny famonjena sy ny fahasambarana. "Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany... Ary hitady Ahy ianareo, dia ho hitanareo Aho" (Jeremia 29:11, 13). Ny fanantenantsika dia miorina ao amin'Ilay Andriamanitra Mpamonjy, Izay mamela ny heloky ny olona mibebaka sy mino ny Filazantsara. Nisolo toerana antsika Jesosy Kristy, nilanja ny vesatry ny fanamelohana antsika. Ny tsirairay dia mila mahare ho azy manokana ilay teny nambara teo amin'ny hazofijaliana, hoe: "Anio no hihaonanao amiko any paradisa" (Lioka 23:43). Fa «nanao» inona moa ilay jiolahy, mba nahazoany io tenim-panantenana io? Niaiky tsotra fotsiny izy fa mendrika ny didim-pitsarana manameloka azy ho faty, ary nitodika tamin'Ilay hany afaka namonjy azy, ka niteny hoe: "Jesosy ô, tsarovy aho".
Tokony ho fantatro hoe aiza ho aiza aho, manoloana an'Andriamanitra. Tena maika ny iheverako anio dia anio, ny momba izany!